ပွောငျး ယွမ် သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ
ကုလသမဂ္ဂလဲလှယ်မှုနှုန်း data တွေကိုမှာ 06/07/2022 12:57
ယွမ် သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ပွောငျး ။ ငွေကြေးလဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် မြန်မာကျပ်ငွေ အတွက် ယွမ် စျေးနှုန်းယနေ့။
1 ယွမ် = 275.87 မြန်မာကျပ်ငွေ
မြန်မာကျပ်ငွေ သို့ ယွမ် ၏ပြောင်းလဲခြင်း၏ပျမ်းမျှတန်ဖိုးအားပြသသည်။ ပွင့်လင်းရင်းမြစ်များမှပေးထားသောငွေကြေးများ၏ငွေလဲလှယ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ ဘဏ်များ မြန်မာကျပ်ငွေ သို့ ယွမ် ကို transfer အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်။ 1 ယွမ်0မြန်မာကျပ်ငွေ အားဖြင့်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ယွမ် 275.87 မြန်မာကျပ်ငွေ ယနေ့ကုန်ကျသည်။ အဆိုပါ ယွမ် နှုန်းမှာရာခိုင်နှုန်း point ရဲ့0ရာစေ့သောအားဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ဆန့်ကျင်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း ယွမ် သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့လ, ယွမ် 276.27 မြန်မာကျပ်ငွေ အဘို့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ သုံးလအကြာ, ယွမ် 283.63 မြန်မာကျပ်ငွေ အဘို့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ယွမ် 253.560င် မြန်မာကျပ်ငွေ အဘို့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကျော်, ယွမ် 0.7% ဖြင့်ပြောင်းလဲ မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေလဲနှုန်းရန်။ တစ်လလျှင် -0.14% - ယွမ် များ၏ငွေလဲနှုန်းအတွက်ပြောင်းလဲမှု။ ယခုနှစ်ကျော်, ယွမ် 8.8% ဖြင့်ပြောင်းလဲ မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေလဲနှုန်းရန်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း ယွမ် (CNY) သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK) Forex လဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ်အသကျရှငျ
ငွေကြေး ပွောငျး ယွမ် မြန်မာကျပ်ငွေ
ယွမ် (CNY) သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK)
1 ယွမ် 275.87 မြန်မာကျပ်ငွေ
5 ယွမ် 1 379.37 မြန်မာကျပ်ငွေ
10 ယွမ်2758.74 မြန်မာကျပ်ငွေ
25 ယွမ်6896.84 မြန်မာကျပ်ငွေ
50 ယွမ် 13 793.68 မြန်မာကျပ်ငွေ
100 ယွမ် 27 587.36 မြန်မာကျပ်ငွေ
250 ယွမ် 68 968.40 မြန်မာကျပ်ငွေ
500 ယွမ် 137 936.80 မြန်မာကျပ်ငွေ
သငျသညျ2758.74 မြန်မာကျပ်ငွေ ဘို့ 10 ယွမ် ကိုဝယ်လို့ရပါတယ် ။ ယနေ့ 25 ယွမ်6896.84 မြန်မာကျပ်ငွေ ။ ပြောင်း 50 ယွမ် 13 793.68 မြန်မာကျပ်ငွေ များမှာ လိုအပ်သည်။ သငျသညျ 27 587.36 မြန်မာကျပ်ငွေ ရှိပါက, ထို့နောက် မြန်မာ ၌သင်တို့ကို 100 ယွမ် ။ ငွေကြေး converter ကိုယနေ့ပေးသနား 68 968.40 မြန်မာကျပ်ငွေ 250 ယွမ် ။ 500 ယွမ် 137 936.80 မြန်မာကျပ်ငွေ ။
ယွမ် သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေလဲလှယ်နှုန်း
ယွမ် သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ယနေ့အချိန်တွင် 06 ဇူလိုင်လ 2022
06.07.2022 276.007648 -7.525711 ↓
05.07.2022 283.533358 -11.588292 ↓
04.07.2022 295.121651 15.052894 ↑
03.07.2022 280.068757 9.946241 ↑
02.07.2022 270.122516 -9.489486 ↓
6 ဇူလိုင်လ 2022, 1 ယွမ် ကုန်ကျစရိတ် 276.007648 မြန်မာကျပ်ငွေ ။5ဇူလိုင်လ 2022, 1 ယွမ် ကုန်ကျစရိတ် 283.533358 မြန်မာကျပ်ငွေ ။ ယွမ် မြန်မာကျပ်ငွေ မှ4ဇူလိုင်လ 2022 - on 295.121651 မြန်မာကျပ်ငွေ ။ ယွမ် မြန်မာကျပ်ငွေ မှ3ဇူလိုင်လ 2022 - on 280.068757 မြန်မာကျပ်ငွေ ။ ပြီးခဲ့သည့်လနိမ့်ဆုံး CNY / MMK နှုန်း 02.07.2022 အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယွမ် သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေလဲနှုန်းသမိုင်း
ယွမ် နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေကြေးသင်္ကေတများနှင့်နိုင်ငံများ
မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေကြေးသင်္ကေတ, မြန်မာကျပ်ငွေ ပိုက်ဆံနိမိတ်လက္ခဏာ: K. မြန်မာကျပ်ငွေ ပြည်နယ်: မြန်မာ. မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေကြေးကုဒ် MMK. မြန်မာကျပ်ငွေ အကြွေစေ့: ပြား.